Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya oo isugu hanjabay Nugliyeer inay isla dhacaan – Bosaso Times News
Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya oo isugu hanjabay Nugliyeer inay isla dhacaan
admin August 10, 2017 Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya oo isugu hanjabay Nugliyeer inay isla dhacaan2017-08-10T07:48:20+00:00 somali News No Comment
Dawladaha Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa isu hanjabeyey ayaamahan inay isla dhacaan Nugliyeer. Madaxweynaha dawladda Waqooyiga Kuriya Kim Jun Un ayaa ugu hanjabay dawladda Maraykanka inuu duqeymo lagu hoobtay la dhici doono jasiirada badweynta Basifiga kutaal ee Guam oo ciidanka Maraykanku ay ka joogaan 6000 oo askari iyo diyaaradaha wax duqeeya. Waqooyiga Kuuriya ayaa ka caraysan cuna qabatayn baahsa oo dhowaan qaramada midowbay ay saareen taas oo Waqooyiga Kuuriya dhaqaaleheeda hoos u dhigaysa ilaa 70%. Taas oo madaxweynaha Kuuriya uu ku eedayey dawladda Maraykanka.
Sidoo kale madaxweynaha dalka Maraykanka Doland Trump ayaa maalintii talaadada yiri Waqooyiga Koriya hadey joojin weydo samaynta nugliyeerka iyo gantaalaha qaada waxaan la dhaceynaa nugliyeer dhulkana waa laga weynayaa. Hadalka madaxweynaha Maraykanka ayaa u muuqda hanjabaadii ugu weyneyd ee madaxweyne Maraykan ah uu jeediyo.
Waxaa kaloo jira in dawladda Maraykan iyo Koonfurta Kuuriya oo saaxiib la ah Maraykanka ay wadaan diyaar garow dagaal iyaga oo sameynayo dhaqdhaqaaqyo ka careysiiyey dawladda Waqooyiga Kuuriya.
Wadamada Aasiya ayaa aad uga welwelsan hanjabaadaha hawada laysu marinayo. Wadamada sida Koonfurta Kuuriya iyo Jaban ayaa aad uga welwelsan khatarta ka iman karta Waqooyiga Kuuriya hadi idagaal dhaco. Waxaa la rumaysan yahay Waqooyiga Kuuriya inay haysato gantaalo rido dheer iyo weliba nugliyeer sidaa awgeedna ay dhibaato weyn u geysan karto wadamada Jaban iyo Koonfurta Kuuriya oo wax ka yar 25km ay caasimadooda Sool u jirto xuduuda Waqooyiga Kuuriya.
http://www.bosasotimes.com/maraykanka-iyo-waqooyiga-kuuriya-oo-isugu-hanjabay-nugliyeer-inay-isla-dhacaan/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/08/KimJungun.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/08/KimJungun-150x150.jpg 2017-08-10T07:48:20+00:00 adminsomali NewsJaban,Maraykan,Waqooyiga KuuriyaDawladaha Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa isu hanjabeyey ayaamahan inay isla dhacaan Nugliyeer. Madaxweynaha dawladda Waqooyiga Kuriya Kim Jun Un ayaa ugu hanjabay dawladda Maraykanka inuu duqeymo lagu hoobtay la dhici doono jasiirada badweynta Basifiga kutaal ee Guam oo ciidanka Maraykanku ay ka joogaan 6000 oo askari iyo diyaaradaha...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Jaban, Maraykan, Waqooyiga Kuuriya
« Deegaanka Qandala.
Isbarbardhiga Degmooyinka Qandala iyo Bender Bayla xaga Horumarka »